Somali | Alzahraa Akademi
NavigationOm Skolan	- Arabiska	- English	- Somali	- SvenskaKontakta Oss!Skola24
Alzaharaà Akademi- Iskoolki dadka oo dhan
Alzahraà Akademi/Bergholmsskolan Alzahraa Akademi/ Bergholmsskolan waa iskool dugsi dhaxe ilaa galaaska 9 aad waxaa shaqeynaayay tan iyo 1997 waa caan ah oo waxbarashadiisa ay lamid tahay tan iskoolada kale oo wadanka wuxuuna raacsan yahay sharciga dalka u degsa.
Iskoolkena Alzaharaa Akademi u ujeedadiisa waa in uu caawiyo ardayga sida uu jormar uha sameyn lahaa dhanka waxbarashada.
Luqada waa aa saaska ugu muhiimsan. Waxaan isku raacsan nahay in Luqada Iswidhishka ay muhiim tahay sidoo kale Afka hooyo waa u muhiim si waxbarashada ugu fiicnaado. Taasi waxay fududeynaysaa in uu luqadiisa aqoonsudo inay wax tarayso.
Farxadau waa u muhiimada shaqadeena. Anaga waxaa waajib nagu ah in qof walbo ama cunug walbo inoo ku faraxsanadao waxbarashada. Waxaan haynaa dad xirfad iyo aqoon u leh shaqadaan oo ah fur furan. Dadkaas waxaa laga sugayaa inay ku biiriyaau iskulka hormumar iyo aqoon dheerad ah.
Iskoolka waxoo ku yaalaa wadada Bagarmossen waxaanuu u dhawyahay.( Skarpnäck centrum) waxoo kaloo u dhaw yahay duurka iyo meelaha cagaarka ka baxo iyo wabiyada waa meel hawadeeda aad u wanaagsan tahay una fiican imlaha ineey wax ku bartaan waxey anfaceysaa maskaxdooda iyo koriimahooda.
Iskoolka waxoo leeyahay hal maamule iyo maammuule xanaanada ah iyo qaybta madadaalada. Iskoolka waxa kale uu leyhay shaqaale caafimaad oo u taagan ardayga caawinaadisa, iyo kuwe kale oo ku shaqo leh cilmi nafsiga una taagan inay caawiyaan ardayga.
Iskoolka waxa uu leeyhay hal qayb oo xanaada caruurta oo u qaybsan labo waxxood iyo mid ah qaybta madadaalada (Fritidshem). Shaqaalaha macalimiinta ah waa labo koox (F-4 iyo 5-9) kuwaas oo kulmo toddobaadkii labo jeer.
Sidoo kale iskuulka wuxuu leeyhaya kooxo kala duman sida kooxda kalsoonida, kooxda maaweeleeda, kooxda waalidiinta iyo guddiga degaanka, kooxahaan qaarkood ardaydayaa ku jirta xataa. Iskuuka wuxuu leeyhay guddiga fasalka, saaxib caawiye iyo guddiga ardayda kaasoo u suurta gelisa ardayda in codkooda la maqlo, gudidaa ardayda waxay si jogta ah ula kulmaan maamulaha iyo kuxigeenkiisa.
Ujeedada Guud ee Dugsiga
Waxaan doonaynaa in cunug walbo uu sameeyo horumar isagoo aan loo fiirinayn jinsige uu yahay, bulshada uu ka soo jeedo. Sida dimoqoraadiyada ay qabto qof walba waa u xor fikirkiisa iyo aragtidiisa u gaarka ah.
Waxaa rabnaa in cunug waliba uu helo caawineed, dhurigelin iskuulkana uu ku joogo isagoo isku kalsoon.
Yunikom waa qaabka macalimiinta ay u shaqeeyaan. Waa meel muhiim u ah macalimiinta iyo maamulka IT oo ah meesha lagu uruiyo warbixinta ardaya lagana raaco qaabta ardayga taalintisoo u korayso.
Sidoo kale waa meel waalidka uu ku xiran yahauy uu ka gelikaro daatooyinke si uu ula socodo waxbarashade cunugiisa.
Iskuulka wuxuu leeyahay xaran weyn oo (fintidskola)lehna jikadeed iyo qol laga dukado. Sidoo kale wuxuu leegahay meel weyn oo qaada 350 qof. Iskuilka wuxuu leeyhay maktbad, qolalka NO, SO iyo barashaade cunto karinta, wuxuu leeyahay oo kale labo xarun oo jimicsiga ah oo u dhow garoomade lga uyaan.
Iskuulka wuxuu leeyahay 5-6 bas oo carurte qaado soona celise. Arday jecel inay gaadidka dadweynaha raacaan waxaa la siiyaa kaarka xilliga
Koo su dhowada Iskoolka!